Beelwaynta Soomaaliyed ee Magaalada diridhaba oo soo dirtay qayladhan. – Xeernews24
Beelwaynta Soomaaliyed ee Magaalada diridhaba oo soo dirtay qayladhan.
22. Dezember 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Beelwaynta Soomaaliyed ee Magaaladda diridhaba waxay marwalba heegan utahay difaaca danaha ummadda Soomaaliyeed
Waxaan maanta oo ay bishu tahay 21/12/2017 booqasho ugu tagnay walaalahayaga Soomaliyeed ee laga soo barakiciyay Deegaanka oromoda kuwaas oo ku sugan xerada ku taala milinium park ee magaalada diridhaba .
Markii aan waraysanay xaaladooda nololeed ,waxay nooga warameen in ay rafaadbadan soo mareen hadana ay ku jiraan xaalad aad u adag oo ayna xataa haysan dhar ay dhaxamaha ka gashadaan iyo cuno ku filan.markaan aad u sii fiirinay baahidooda waxaa u wayn bustayoow ay ka huwadaan dhaxamaha .
Umada Soomaaliyed waxaan ogaysiinaynaa in dadkaasi baahi dhan walba leh ay si ba’an u hayso.caruurta ay wataan waxbarasho mahaystaan, xaquuqdii dadka qaxootiga ah mahaystaan . sidaa daraadeed waxaan ushegaynaa umada Soomaliyeed ee daafaha dunida ku nool inay gurmad dhanwalba leh u sameeyaan walaalohoogaas tabaalaysan ee rafaadka badan ku jira.
Waxaan ognahay dadka lagu sheego barakacayowga oromada in dhamaan baahidii dad qoxootiya lahaayeen loo dhamaystiray haday tahay dhanka maamulka oromada ama dhanka shacabkoodaba .
Dhanka kale waxaa ka jira jaamacada diridhaba kacdoono ay wadaan ardayda oromadu . waxaa daandaansi in mudo ahba loo gaysanayay ardayda Soomaalida ee jaamacada ku jira. Daandaansigaas wuxuu ahaa nasoo raaca oo aan kawada hor tagno dawlada federalka ethiopia .hase ahaatee jawaabta dhalinyarada jaamacada ku jira ee Soomaliyed ayaa ahayd anagu halkan wax barasho ayaan u nimidnay ee naga raali ahaada.
Ardaydii oromadu dagaal ayay ku qaadeen Soomalida jaamacada joogtay ,in mudo laba cisho ah na weerar iyo dhagax tuur iyo budad ku dagaalam ayay ku hayeen dhalinyartaas Somalidda ee waxbaranaysa .waxay dhaawaceen dhawr qof oo badh kood gacmaha laga jabiyay badhna ilkaha laga daadshay. Waxaa naxdin leh booliskii soo gurmaday ee nabada ka dhex ridi lahaa dhalinyarada oromada iyo Somalida ayaa eex cad sameeyay. Boolisku waxay laayeen ooy si foolxun u jajabiyeen qaar badana ilkaha ka daadsheen ardaydii jaamacada ee Soomaliyeed.ardaybadana xabsiga ayay saaka u taxaabeen.
Arintu waxay tahay cudurka gala fardaha haddi laga gubo dameer dawada lama garani karo !!!
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/special-raport.jpg 576 1021 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-22 11:37:532017-12-22 11:37:53Beelwaynta Soomaaliyed ee Magaalada diridhaba oo soo dirtay qayladhan.
Golaha Guud Ee Qaramada Midoobay Oo waji gabax ku riday Go’aankii Trump Ee... Daawo: Wasiir ex Wasiir Waabari oo marku bila camal noqday afka furtay,sheegayn...